နှစ်နှစ်အတွင်း ပရိသတ် အသိအမှတ် ပြုတဲ့သူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် Russell
ပို့စ်တင်ချိန် - 11/25/2013 06:26:00 PM
Q. Russell ခု အနုပညာအ လုပ်တွေပဲဇောက်ချ လုပ်သွားတော့ မှာလား။
A. ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် သရုပ် ဆောင်အလုပ်တွေကို စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
Q. အိပ်မက်ဆုံရာနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ဝေဖန်မှုတွေပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင် လဲ။
A. အိပ်မက် ဆုံရာမှာ ကိုယ့်ကို ကောင်းစေချင်လို့၊ ပြင်စေချင်လို့ ပြောကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အမျိုးစုံ ပါပဲ။ ကျွန်တော် ကတော့ အားလုံး ကို Positive အမြင်နဲ့ပဲ ကြည့်ပြီး ဆက်ကြိုးစားသွားမှာပါ။
Q. သင်္ဘော ဆက်မတက်တော့ ဘူးလား။
A. ကျွန်တော် ရေကြောင်းသိပ္ပံ မှာ နှစ်နှစ်သင်ယူ ခဲ့တယ်။ ဒါကို မနှ မျောဘူးလား ဆိုရင် ကျွန်တော် မနှ မျောပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်ပြတ် သားသားချပြီးပြီ။ ကျွန်တော်ခုလို အနုပညာ အလုပ်ကို ငယ်ငယ်က တည်းကလုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်မရလို့ သာကျောင်းတက်နေခဲ့တာ။ ခုလို အခွင့်အရေး ရလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကြိုးစားကြည့်ချင် ပါတယ်။
Q. ခုလုပ်ကိုင် လာရတဲ့ အခါ တွေ့ကြုံရတာတွေက
A. ဒီလောကမှာက ဖြတ်သန်း ရတဲ့ပုံစံတွေ မတူပါဘူး။ ကျွန်တော့် ထက်ပိုပြီးရုန်းကန်ကြိုးစား ခဲ့ရတဲ့သူတွေ လည်းရှိမယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်က တော့ တွေ့ကြုံလာတာကို အခက် အခဲလို့လည်းမယူဆပါဘူး။
Q. Show တွေလျှောက်လာ တာတွေ့ရတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ဘာကိုအဓိကလုပ်ဖြစ်မ လဲ။
A. ကျွန်တော် နှစ်ခုစလုံးကို တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့အနုပညာ ရှင်ဖြစ်ချင်တယ်။
Q. အမေကတော့ သုံးနှစ်အ တွင်းဖြစ်မလာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အချိန် ကန့် သတ်ချက်ကြီးကိုရော
A. အမေကတော့ အိပ်မက်ဆုံ ရာ Final ကနေ နောက်ဆုံးနှစ် အတွင်း Russell တစ်ခုခုဖြစ်မလာ ခဲ့ရင် သင်္ဘောပြန်တက်ရင်တက် မတက်ရင် ဂျပန်မှာကျောင်းသွား တက်ရမယ်တဲ့။ ကျွန်တော် ဒီနှစ်နှစ် အတွင်းမှာ ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြု တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုး စားမယ်လို့ သန္နိ|ာန်ချထားပါတယ်။
Q. အိပ်မက်ဆုံရာက သူငယ် ချင်းတွေနဲ့ရော ဘာတွေလုပ်ဖို့ အစီ အစဉ်ရှိလဲ။
A. အိပ်မက်ဆုံရာ Season6က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သင်္ကြန်မတိုင် ခင် အခွေထွက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါ တယ်။ တစ်ယောက်စီတိုင်းကို အား ပေးစေချင်တယ်။ MTV တွေ ရိုက် ဖို့ရှိသလို့ ကျွန်တော်သရုပ်ဆောင် လုပ်မှာမို့ သရုပ်ဆောင်တာကိုလည်း အားပေးဝေဖန်စေချင်ပါတယ်။